निर्मलाकी पन्तकी आमामाथि हातपात ! - Deshko News Deshko News निर्मलाकी पन्तकी आमामाथि हातपात ! - Deshko News
निर्मलाकी पन्तकी आमामाथि हातपात !
कञ्चनपुर, निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तमाथि श्रीमान र कान्छि श्रीमतीले हातपात गरेका छन् । क्षतिपूर्तिको रकम बुझ्ने र डिएनएका लागि रगत दिने विषयमा विवाद भएपछि श्रीमान यज्ञराज पन्तले कान्छी श्रीमतीसँग मिलेर हातपात गरेका हुन ।
आफुसँग सल्लाहा नगरी रगतको नमूना संकलन गर्न दिएको भन्दै दुर्गादेवि पन्तलाई श्रीमान यज्ञराज पन्त र उनकी कान्छी श्रीमती लक्ष्मी पन्तले हातपात गरेका छन् । यही बीचमा निर्मलाकी आमाले क्षतिपूर्तिको रकम समेत बुझ्ने बताएकी थिइन ।
छोरीको स्वभावमा भएको डीएनए वास्तविक भए नभएको पुष्टि गर्न पन्तले बुधबार महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रगतको नमूना संकलन गरेर प्रहरीलाइ दिएकी थिइन् । डीएनए परीक्षणका लागि रगतको नमूना संकलन गरिएको विषयमा असन्तु्ष्टि जनाउँदै श्रीमान र सौताले आफूमाथी दूव्र्यवहार गरेको दुर्गादेवि पन्तले बताइन् । विवादका क्रममा श्रीमानले आफूमाथी हातपात गरेको उनको भनाई छ ।
छोरीको बलात्कार पछि हत्या भएको ६ महिना वितिसक्दा समेत न्याय नपाएको भन्दै दुर्गादेवीले राहत रकम बुझ्ने निर्णय गरको रगतको नमूना दिएपछि सोही विषयलाई लिएर घरमा विवाद भएको छिमेकीले बताएका छन् ।